"गजुर छ मन्दिर हैन, पखेटा छ चरा हैन, करंग छ मान्छे हैन, घुम्रिएको पुछर छ कुकुर हैन के हो साथी तेस्को नाम?"
गाउँखाने कथा भन्ने बित्तिकै आफूलाई चाँहि स्कुलको याद आउँछ । स्कुल पढ्दाताका गाउँखाने कथाहरु धेरै खेलिन्थ्यो, अरुलाई सोधिन्थ्यो, जवाफ पनि धेरै मिलाइन्थ्यो । हरेक बालपत्रिकामा "गाउँखाने कथा" हुने कारण पनि उ बेला धेरै जानकारी राखिन्थ्यो होला । हिजोआज गाउँखाने कथाका उत्तरहरु मिलाउन आफूलाई त हम्मे हम्मे पर्छ ।सबैकुरामा गुगलको भर पर्ने गरेका कारण कति कथाहरु त बिर्सि पनि सकियो ।
तर गाउँखाने कथालाई इन्टरनेटमा जिवित राख्न गाउँखाने कथा डटकम आएकोछ । सुशिल गुप्ताले निर्माण गरेको यस साइटमा गाउँखाने कथाहरु पढ्न सकिन्छ, अनि आफूले जानेका गाउँखाने कथाहरु साइटमा थप्न पनि मिल्छ । भविष्यमा गाउँखाने प्रतियोगिता पनि साइटमा राख्ने सुशिलको 'प्लान' छ ।
प्रयोगकर्ताहरुले अहिलेको लागि आफूलाई आउने गाउँखाने कथाहरु साइटमा थपिदिएर, गाउँखाने कथाको डेटावेस निर्माणमा सहयोग गर्न सक्छन् । 'थप्नुहोस्' सेक्सनमा गएर गाउँखाने प्रश्न, उत्तर, आफ्नो नाम र इमेल लेख्न सकिन्छ । यसरी थपिएको गाउँखाने कथा केही समयपछि नै साइटमा देखिनथाल्छ । गाउँखाने कथाको प्रश्न सँगै, उक्त कथा राख्नेको नाम पनि साइटमा देखिन्छ ।
यो साइटलाई नेपाली गाउँखाने कथाको 'डेटावेस' को रुपमा लिनसकिन्छ, भलै यसमा धेरै कामहरु गर्न बाँकी छन् । साइटमा सबैभन्दा आवश्यक 'फिचर' भनेको सर्च हो । अहिले यो साइटमा कुनै पनि गाउँखाने कथाहरु सर्च गर्न मिल्दैन । साइटमा गएपछि 'नेक्स्ट' - 'नेक्स्ट' गर्दै गाउँखाने कथाहरु हेर्नुपर्नेहुन्छ, र यसरी हेर्दा प्राय: धेरै गाउँखाने कथाहरु दोहोरिएको देखियो । साथै कुनै पनि कथाहरु सिधै सेयर गर्न मिल्दैन, सबै कथाको लागि बेग्लाबेग्लै 'युनिक युआरएल' हुनु जरुरीछ, ताकी आफूलाई मन परेको कथाहरु साइटबाट सेयर गर्न सकियोस् ।
केही समय अघि अनलाईन नेपाली शब्दकोश 'आबुई' आएको थियो । अब गाउँखानेकथा डटकम आएको छ । आफूलाई थाहा भएको कथाहरु यसमा राख्ने हैन त?
ए! अनि माथिको 'गाउँखाने कथाको उत्तर' तलको कमेन्टबक्समा लेख्नुहोला है ।
Sushil Gupta August 6, 2013 at 9:28 AM
Thanksalot bro for the coverage. And also you have wrote some really nice suggestions there, I'll make sure to look into that. Thank youalot.
Deepak Parajuli August 6, 2013 at 10:42 AM
Siddhartha Pudasaini August 11, 2013 at 5:42 PM
Itsavery important step in Nepali Literature coverage... Itsavery integral part of Nepali tradition, history and culture... Great job Shushil Gupta and to you Aakar bro for the coverage....